Izinqubomgomo Zokukhansela ze-Airbnb
Indlela ukukhansela okusebenzayo ngayo lapho ubhukhile
Ekuhlaleni kobusuku obungaphansi kuka-28, ababungazi bangakhetha ukuthi iziphi izindlela zokukhansela abangazinika izivakashi. Ekuhlaleni kobusuku obungu-28 noma ngaphezulu, inqubomgomo yokukhansela yeSikhathi Eside isebenza ngokuzenzakalelayo.
Inqubomgomo yokukhansela engaqinile kakhulu
Inqubomgomo yokukhansela eqinile
Izinsuku Ezingu-30 Zenqubomgomo Yokukhansela Eqine Kakhulu
Inqubomgomo Yokukhansela Eqine Kakhulu Yezinsuku Ezingu-60
Ukukhansela kwamahhala kuze kube amahora angu-24 ngaphambi kokungena (isikhathi esiboniswe ku-imeyili yokuqinisekisa).
Ngemva kwalokho, khansela ngaphambi kokungena futhi ubuyiselwe imali ephelele, ngaphandle kobusuku bokuqala kanye nenani lesevisi.
Usuku olu-1 ngaphambili
Sin, Mey 13
Ukuze kubuyiswe imali ephelele, isivakashi kufanele sikhansele kusasele okungenani amahora angu-24 ngaphambi kwesikhathi sendawo sokungena endlini (esiboniswe ku-imeyili yokuqinisekisa).
Hla, Mey 14
Uma isivakashi sikhansela emahoreni angu-24 ngaphambi kokungena, ubusuku bokuqala nenani lesevisi ye-Airbnb akubuyiselwa mali.
Mso, Mey 17
Uma isivakashi sifika futhi sinquma ukuhamba ngaphambi kwesikhathi, isilinganiso sobusuku ngabunye ngobusuku obungahlalwanga amahora angu-24 ngemva kokukhansela sibuyiselwa imali ephelele.
Ukukhansela kwamahhala kuze kube yizinsuku ezingu-5 ngaphambi kokungena (isikhathi siboniswe ku-imeyili yokuqinisekisa).
Ngemva kwalokho, khansela ngaphambi kokungena futhi ubuyiselwe u-50%, ngaphandle kobusuku bokuqala nenani lesevisi.
Izinsuku ezingu-5 ngaphambili
Son, Mey 9
Ukuze kubuyiswe imali ephelele, isivakashi kufanele sikhansele kusasele okungenani izinsuku ezingu-5 ezigcwele ngaphambi kwesikhathi sendawo sokungena endlini (esiboniswe ku-imeyili yokuqinisekisa).
Uma isivakashi sikhansela ezinsukwini ezingaphansi kwezingu-5 ngaphambi kokungena, ubusuku bokuqala kanye no-50% wabo bonke ubusuku ngemva kwalokho, nenani lesevisi ye-Airbnb, akubuyiselwa imali.
Uma isivakashi sifika futhi sinquma ukuhamba ngaphambi kwesikhathi, u-50% wesilinganiso sobusuku ngabunye ngobusuku obungahlalwanga emahoreni angu-24 ngemva kokuthi ukukhansela kwenzekile kubuyiselwa imali.
Ukukhansela kwamahhala kwamahora angu-48, uma nje isivakashi sikhansela kusasele okungenani izinsuku ezingu-14 ngaphambi kokungena (isikhathi esiboniswe kuyi-imeyili yokuqinisekisa)
Ngemva kwalokho, izivakashi zingakhansela kuze kube yizinsuku ezingu-7 ngaphambi kokungena futhi zibuyiselwe u-50% wesilinganiso sobusuku ngabunye, kanye nemali yokuhlanza, kodwa hhayi imali yesevisi
Izinsuku ezingu-14 ngaphambili
Amahora angu-48 ngemva kokubhukha
Ukuze kubuyiselwe imali egcwele yesilinganiso sobusuku ngabunye, isivakashi kufanele sikhansele phakathi namahora angu-48 okubhukha futhi okungenani kusasele izinsuku ezingu-14 ezigcwele ngaphambi kwesikhathi sendawo sokungena endlini (esiboniswe ku-imeyili yokuqinisekisa).
Izinsuku ezingu-7 ngaphambili
Ukuze kubuyiswe imali engu-50% wesilinganiso sobusuku ngabunye, isivakashi kufanele sikhansele kusasele izinsuku ezingu-7 ezigcwele ngaphambi kwesikhathi sendawo sokungena endlini (esiboniswe ku-imeyili yokuqinisekisa), ngaphandle kwalokho akukho mali ebuyiselwayo. Uma kungu-50% kuphela wemali yokubhukha okhokhiwe, ngeke ubuyiselwe kanti u-50% osele ngeke ukhokhiswe.
Hla, Mey 21
Uma isivakashi sikhansela ngaphansi kwezinsuku ezingu-7 kusengaphambili noma sinquma ukuhamba masinya ngemva kokungena, akubuyiselwa imali yobusuku obungachithwanga.
Ngemva kwalokho, izivakashi zingakhansela kusasele okungenani izinsuku ezingu-30 ngaphambi kokungena futhi zibuyiselwe u-50% wenani lobusuku, kanye nenani lokuhlanza, kodwa hhayi inani lesevisi
Inani lesevisi ye-Airbnb alibuyiselwa
Le nqubomgomo itholakala kuphela kubabungazi abaxhume ngesofthiwe
Izinsuku ezingu-30 ngaphambili
Tha, Eph 14
Ukuze kubuyiswe u-50% wesilinganiso sobusuku ngabunye, isivakashi kufanele sikhansele kusasele izinsuku ezingu-30 ezigcwele ngaphambi kwesikhathi sendawo sokungena endlini (esiboniswe ku-imeyili yokuqinisekisa).
Uma isivakashi sikhansela ngaphansi kwezinsuku ezingu-30 kusengaphambili, ubusuku obungahlalwanga abubuyiselwa imali.
Uma isivakashi sifika futhi sinquma ukuhamba ngaphambi kwesikhathi, ubusuku obungahlalwanga abubuyiselwa imali.
Izivakashi zingakhansela kusasele izinsuku okungenani ezingu-60 ngaphambi kokungena futhi zibuyiselwe imali engu-50% wenani lobusuku, kanye nenani lokuhlanza, kodwa hhayi inani lesevisi
Izinsuku ezingu-60 ngaphambili
Mso, Mas 15
Ukuze kubuyiswe imali engu-50% wesilinganiso sobusuku ngabunye, isivakashi kufanele sikhansele kusasele izinsuku ezingu-60 ezigcwele ngaphambi kwesikhathi sendawo sokungena endlini (esiboniswe ku-imeyili yokuqinisekisa).
Uma isivakashi sikhansela ngaphansi kwezinsuku ezingu-60 kusengaphambili, ubusuku obungahlalwanga abubuyiselwa imali.
Isetshenziswa ngokuzenzakalelayo ekubhukheni kobusuku obungu-28 noma ngaphezulu
Ukubhukha kubuyiselwa imali ephelele amahoreni angu-48 ngemva kokuqinisekiswa kokubhukha, uma nje ukukhansela kwenzeka kusasele okungenani izinsuku ezingu-28 ngaphambi kokungena (u-3:00 PM wesikhathi sendawo ovakasha kuyo uma kungacaciswanga)
Emahoreni angaphezu kwangu-48 ngemva kokubhukha, izivakashi zingakhansela ngaphambi kokungena futhi zibuyiselwe imali ephelele, ngaphandle kwezinsuku ezingu-30 zokuqala kanye nenani lesevisi
Izinsuku ezingu-28 ngaphambili
Ukuze ubuyiselwe imali ephelele, khansela engakapheli amahora angu-48 ubhukhile, okungenani ezinsukwini ezingu-28 ngaphambi kwesikhathi sokungena endlini (ngo-3: 00 PM uma kungashiwongo ngokuqondile) ngosuku lokungena.
Uma isivakashi sikhansela ukubhuka ngaphambi kosuku lokuqala, umbungazi esekhokhelwe imali yenyanga yokuqala, leyo mali ngeke iphindiselwe esivakashini.
Son, Jun 13
Uma isivakashi sikhansela ukubhukha phakathi nokuhlala kwaso, isivakashi kumelwe sisebenzise ithuluzi lokushintsha ku-inthanethi ukuze sivume usuku olusha lokuphuma. Kungakhathaliseki ukuthi yiluphi usuku lokuphuma olukhethiwe, isivakashi kudingeka sikhokhele umbungazi izinsuku ezingu-30 ezilandela usuku lokukhansela, noma kuze kube usuku lokugcina lokubhukha kokuqala kwesivakashi uma ingxenye esele yokubhukha kokuqala ingaphansi kwezinsuku ezingu-30.
Qaphela: Izivakashi ngeke zibuyiselwe imali yesevisi ye-Airbnb uma ziye zabuyiselwa imali yesevisi kathathu ezinyangeni ezingu-12 ezidlule noma uma ukubhukha okukhanseliwe kwenzeka ngesikhathi esisodwa nokubhukha kwamanje.
Ingabe izivakashi ziyabuyiselwa imali yokuhlanza?
Imali yokuhlanza iyabuyiselwa uma isivakashi sikhansela ngaphambi kokuba singene endlini.
Ingabe izivakashi zingabuyiselwa imali yazo uma indlu ingekhona lokho ezikulindele?
Sizosiza izivakashi ukuba zithole indawo entsha yokuhlala noma zibuyiselwe imali yazo uma zingakwazi ukungena endlini, uma indlu ingcolile, ingaphephile noma uma kunesilwane umbungazi angazange akhulume ngaso lapho echaza indlu. Funda okwengeziwe
Ingabe izivakashi zingabuyiselwa imali ephelele uma umbungazi engakwazi noma engafuni ukulungisa inkinga?
Izivakashi kufanele xhumana nathi kungakapheli amahora angu-24 ethole inkinga. Ezimweni ezifanelekayo, siyokukhansela ukubhukha bese siphindisela imali.
Kuthiwani uma isivakashi sidinga ukukhansela ngenxa yesimo esiphuthumayo?
Singase sikwazi ukubuyisela imali uma isivakashi kufanele sikhansele ngenxa yesimo esiphuthumayo. Funda okwengeziwe
Kuthatha isikhathi esingakanani ukubuyiselwa imali?
Imali siyibuyisa ngokushesha lapho ukhansela futhi ngokuvamile uyibona zingakapheli izinsuku ezingu-3 kuya kwezingu-5, kodwa ngezinye izikhathi ithatha isikhathi eside esiyizinsuku ezingu-15 ngaphambi kokuba uyibone. Kwamanye amazwe, njengaseBrazil naseNdiya, kungathatha izinyanga ezingu-2 ukuba imali ibuyiswe.
Kuthiwani uma ngingaqiniseki ukuthi iyiphi inqubomgomo yokukhansela yokubhukha kwami noma uma inqubomgomo ingaveli lapha?
Ngezikhathi ezithile sivumela ababungazi bazame izinqubomgomo ezintsha esizihlolayo. Bheka njalo imininingwane yakho yokubhukha—ungayithola kunqubomgomo yokukhansela esebenza kulokho kuhlala kwakho.